2021 PVC Rubber Label Kugadzira Machine i Rubber Keychain Command | Woldo Zvishongo Enamel Machine Supporter
kudyara uropi uye maziso mumushini
Rubber Label otomatiki kugadzira muchina
Vertical PVC Label Propensing Machine
Akangwara Visual Crystal Kuisa Machine
Yakazara otomatiki yekugadzira mutsara
Akangwara anoona otomatiki
Silicon Logo Kugadzira Machine
PVC Label Kugadzira Yekutsigira Machine
Industrial otomatiki oven
Nei Sarudza Woldo?
Solution & Mhosva
Akangwara Visual Diamond Set Crine
Nyoro rabha patches kugadzirwa
Rutsoka rabha rabha slipper kumusoro kugadzirwa
Rubber Kusimudzira Souvenir Production
Rubber keychain kugadzira muchina
Rubber Luggege tag kugadzira muchina
Rubber Collaster Kugadzira Machine
Akangwara Visual ENamel Machine
Akangwara otomatiki muchina enamel mabhatani
Akangwara Visual Visual Paint Machine Paint Shoe Logos
Akangwara Visual otomatiki muchina achipenda zvishongo
Akangwara Visual otomatiki muchina weinjini
Akangwara Visual ENamel Machine | Kusimudzira Souvenir
Akangwara Machine Paint PaGarment Logos
Yakajeka Crystal Deming Machine
Mosaic Doming Sticker Command
EPOXY STICKER | Pu Label Doming Mushini
Gomba hang tag doming muchina
EPOXY DOMMIS WEMUYO BHUKU
Yakajeka EPOXXY Coating Primotion keychain | Mari
Magetsi Electronics Indasitiri
Kugadzira kwakanaka kunotanga ne WElDO
Mutungamiri mukushandurwa kwehungwaru chiratidzo chemuchina technology
Nemakumi emakore ekupfuma kwemaindasitiri ruzivo, WELDO inotarisa pane zvizere otomatiki ekuparadzira michina uye michina yekupenda. Yakapfuura iyo ISO9001 yemhando system chitupa uye ine akati wandei akazvimiririra ehungwaru epfuma patent uye akawanda software ma copyright. Kambani yedu yapfuura mbiri-yakapfava bhizinesi setifiketi, iyo yazvino tekinoroji mwero uye yekutengesa vhoriyamu yasvika pasirese-inotungamira nhanho.
Nhare mbiri chiteshi kumhanya muchina
Kushanda: 1.suitable kune akasiyana emvura zvinhu, zvakadai kubheka pendi, epoxy nebwe AB guruu, enamel, UV guruu, zvemagetsi silicone, sekristaro guruu, epurasitiki ingi, simbi ingi, EMI kondakita guruu, conductive cohesive, pakarepo guruu, vachikanda guruu, solder paste, lubricant, sirivha glue, tsvuku glue, thermal paste, kusanaya kwekudzivirira kunaya, pendi yakajeka, screw fixing mumiriri, PU resin, yakaderera / yepakati viscosity glue, nezvimwe. 2.inogona kushandiswa kugovera mvura yezvinhu pane akasiyana zvinhu workpiece, senge simbi, mapurasitiki, matanda, zvitambi zvichingodaro.
Weldo 5 mavara PVC / Silicon chitaridzi otomatiki dispenser muchina
Zvimiro: 1.Import JPG faira kune software kune purogiramu yekupa nzira. 2.Using computer programming, software yacho inonyatsooneka, iri nyore uye inokurumidza. 3.Single nozzel kana yakawanda kamwene inogona kushandiswa zvinoenderana nekugadzirwa chaiko. Max 5 nemabhomba anoshanda pamwechete kugadzirisa kugadzirwa. 4.Up kusvika gumi nematanhatu akasiyana mapurogiramu mapfupi mabhatani, sutu yemazhinji maitiro ekugadzira. 5.After chirongwa chakarongedzwa, chinogona kuponeswa mukombuta uye inoshanda zvachose. Kana chigadzirwa chacho chichifanira kuitwa nguva inotevera, chirongwa ichi chinogona kudaidzwa kumusoro zvakananga pasina chirongwa chechipiri. 6.Dispensing maviri anoumba panguva imwe chete pamwe chakuvhu chinzvimbo basa. 7.Suit yakaoma uye yakakwira kukosha-yakawedzera PVC uye silicone zvigadzirwa. 8.Rapid kugadzirwa, mumwe muchina yakaenzana 3 kusvika 5 vashandi nomumwe, izvo zvinogona zvikuru kupfupisa kuti dhirivahari nguva. 9.Stably ita PVC / silicone zvigadzirwa, mhando yepamusoro, yakaderera yakaremara rate, inogona kubatsira kudzikisa mutengo. 10.Software nemuchina mashandiro zviri nyore kudzidza, zvinogona kubatsira kupfupisa nguva yekudzidzira. 11.Programming nzira: Dot, mutsara, arc.
Weldo 12 mavara PVC / Silicon label otomatiki dispenser muchina
Zvimiro: 1.Import JPG kana DXF faira kune software kune purogiramu yekupa nzira. 2.Flexible programming nzira, inogona maererano nevatengi vane fancy kusarudza komputa graphic programming kana kudzidzisa bhokisi (batsira) chirongwa. 3.Single nozzel kana yakawanda kamwene inogona kushandiswa zvinoenderana nekugadzirwa chaiko. Max12 mokugezera achishanda pamwechete kuvandudza kugadzirwa. 4.Up kusvika gumi nematanhatu akasiyana mapurogiramu mapfupi mabhatani, sutu yemazhinji maitiro ekugadzira. 5.After chirongwa chakarongedzwa, chinogona kuponeswa mukombuta uye inoshanda zvachose. Kana chigadzirwa chacho chichifanira kuitwa nguva inotevera, chirongwa ichi chinogona kudaidzwa kumusoro zvakananga pasina chirongwa chechipiri. 6.Dispensing maviri anoumba panguva imwe chete pamwe chakuvhu chinzvimbo basa. 7.Suit yakaoma uye yakakwira kukosha-yakawedzera PVC uye silicone zvigadzirwa. 8.Rapid kugadzirwa, mumwe muchina yakaenzana 3 kusvika 5 vashandi nomumwe, izvo zvinogona zvikuru kupfupisa kuti dhirivahari nguva. 9.Stably ita PVC / silicone zvigadzirwa, mhando yepamusoro, yakaderera yakaremara rate, inogona kubatsira kudzikisa mutengo. 10.Can inogona kubatanidzwa pamwe robhoti kuumba zvizere otomatiki kugadzirwa mutsetse, izvo zvinogona vapkile kubereka uye kuderedza basa mari. 11.Software nemuchina mashandiro zviri nyore kudzidza, zvinogona kubatsira kupfupisa nguva yekudzidzira. 12.Programming nzira: Dot, mutsetse, arc.
Weldo 18 mavara PVC / Silicon label otomatiki dispenser muchina
Chigadzirwa chinoshandiswa: 1.Gift zvigadzirwa 2.Keychain, bhaa bonde, mukombe coaster, Lageji tag, Pen mutyairi kesi, 3.Silicone mobile cae, silicone wachi, silicone wrist, PVC nhare mbozha inobata, PVC bhodhoro rinovhura. 4.zipper puller, rabha bheji, shangu kumusoro, chiredzo uye zvishwe zvekusungira 5.Shoes yekufukidza, TPR anticollision tambo yemagurovhosi, shangu chete
Yakazara tekinoroji yekugadzira, inosunungura vashandi, kuchengetedza vashandi uye kugadzirisa kugona!
WELDO inopa yepamusoro glue yekupa michina, hunyanzvi uye hwakasarudzika tekinoroji yekushandisa mhinduro kubatsira vatengi kuwedzera kushanduka kwebhizinesi, kugadzirisa kugona kwekugadzira uye kuzadzikisa zvinangwa zvekusimudzira, kugadzira michina nemidziyo yekushandisa kuwedzera kugona kwekugadzira uye kugadzikana kwechigadzirwa, shandura mari yekugadzira uye kuwedzera purofiti.
WELDO michina michina inopa mhando dzekupa muchina uye scara robhoti kune vatengi vepasirese, chigadzirwa chedu chinoshandiswa zvakanyanya mumagetsi, mota, midziyo yemumba, shangu zvishongedzo, zvitambi, midhudhudhu, kudonhedza plastiki, Hardware mabheji, zvishongo zvipo, Watches, chikafu, gorofu, nzara, nhare mbozha, magirazi, uye mamwe masango Vashandirwi venguva yakareba vanosanganisira Midea, Huawei, Gree, Skyworth, Haier, uye mamwe makambani eFortune 500 uye huwandu hwakawanda hwekugadzira mabhizinesi madiki nepakati.
Kugadzira chitaridzi chemuchina wekumhanyisa
Yekumhanya muchina weakakwira kupenya arc zvigadzirwa
Midhudhudhu hood yekupenda
Pikipiki hood yekupenda
WEIDO Paka mavara emotokari emuchina wekukurumidza
WEIDO Ratidza mavara emotokari emuchina wepamhanyisa
WELDO yakavambwa munaKurume 2007.
WELDO ikambani yehunyanzvi inotarisa pakutsvagisa nekusimudzira, kugadzirwa, uye kutengeswa kwemichina yekugadzira michina yekudzora kwemvura, senge otomatiki kuendesa glue, kupa mapurasitiki, kuchenesa uye majekiseni ejekiseni. Chikamu chedu chikuru chinosanganisira kupa muchina uye scara robhoti, nezvimwe.
Ipai indasitiri-inotungamira yekuchenjera yekugadzira tekinoroji, nyanzvi, yakakwana, yakakodzera-pre-kutengesa, kutengesa, Pashure-pekutengesa sevhisi, hunyanzvi hwasarudzika tekinoroji yekushandisa mhinduro, kugadzira advanced visual automation.
Taura nesu kuti uwane mamwe mabhizinesi mhinduro
Kugadzira uye kutsvagisa uye kugadzira ekugadzirisa ehungwaru mhinduro dzinopa kukosha kwebhizinesi kumabhizinesi zvichienderana nezvinodiwa.